Jiri 3D - LucidPix meziwanye foto ndụ gị
Ndụ foto dị na 3D
Ọtụtụ ndị mmadụ na-achọ mgbe niile imeziwanye foto ndụ ha ka ha na-ewe n'ogige ha na n'azụ ụlọ ha. Fọdụ chere na ọ chọrọ ọkụ pụrụiche, ndị ọzọ kwenyere na ọ chọrọ igwefoto dị egwu. Gụbọ ka ị chọpụta ihe kpatara ihe niile ị nụwururu na teknụzụ.
Ike ọhụrụ dị na foto ndụ ọzọ Ihe onyonyo 3D. Ikike ha imeghari onyonyo n’azụ ma ọ bụ ọmarịcha ọrụ nka n’ime eserese na-enye gị ike iji foto gị gaa ọkwa nke ọzọ.
N’okpuru, ị ga-achọpụta ụdị foto nwere ikike kachasị ịtụgharị na 3D, otu esi ewere foto ndị ahụ, yana ngwa ọrụ kacha mma maka ntụgharị 3D.
Isi ihe maka ezigbo 3D ka foto ndụ
A bịa n’ịhọrọ ihe onyonyo ịgagharị na 3D, enwere isi ihe ole na ole nwere ike inye gị ọfụma n’ezie. Nke mbu, n’enyemaka mgbe n’inwe foto nwere ala di omimi, nke putara na isi n’ile ya anya, ma n’okpuru ya puta.
Photohọrọ onyonyo gbasara ikuzi eserese, karia ụdị ntụgharị okirikiri na - enye gị ihe okike 3D iji jupụta ihuenyo ekwentị karịa nke ọma.
Ezigbo Okwu maka ịdị ndụ foto na 3D
N'ime foto ndụ ka enwere ụfọdụ ihe na-enyo enyo dị ịtụnanya na 3D. Otu isiokwu nke na-adọrọ anya mgbe niile bụ mkpụrụ osisi ma ọ bụ osisi. Na mgbakwunye na ịbụ ihe omumu ihe omuma nke ihe omuma, ha di ocha, mara nma, ma nwee ike iweta otutu ihe oma zuru oke. Mmadu nwere ike iche banyere mkpuru nkpuru osisi, obi uto nke okwute, ma obu itughari nke ifuru n'ifufe, na-adọta ha n’okwu banyere foto gi. Isiokwu ndị a na-ewetara onye na-ekiri ụdị obi ụtọ na obi iru ala.
N'agbanyeghị eserese ndụ
Ofdị ndụ ọzọ ọ bụla nke na-atụgharị ihe oyiyi dị egwu na 3D dị mma bụ eserese eserese dị mma. Enwere ọtụtụ ndị omenkà dịka Vincent Van Gogh, Leonardo Da Vinci, na Michelangelo ndị niile nwere ọtụtụ ọrụ ọrụ nkà ha agbanweela nke ọma na 3D. Ọ bụghị naanị na ọ bụ ihe ngosi ha, mana ọdịdị ala ha na ibe ha mere ka eserese dị oke mkpa mgbe a gbanwere gaa 3D.
Ọ baghị uru ikwu, mgbe ihe osise nke nghọta na ike ahụ nwere ike ịkakwu miri ala n'etiti ntụgharị 3D, mpempe akwụkwọ ndụ ọ bụla ị họọrọ nwere ike ịtụgharị ma jiri ya rụọ ọrụ nke ukwuu.
Na mmechi, enwere otutu ngalaba n'ime oyuyo ihe osise na nka, mana ihe ndi a puru ime ka ha bulie elu ma buru nke oma mgbe agbanyere 3D. Yabụ, mgbe ị na-ekpebi ma ndụ ị ka nwere ike ịbụ ọfụma karịa na 3D, gaa na ngwa 3D, dị ka LucidPix, ma hụ n'onwe gị ike nke na-ese foto na 3D n'ezie.
Etu ị ga - eme Photoshop Camera Camera 3D →← Ntuziaka Mbido LucidPix